Khabiir ku-meel-gaar ah: IoT iyo Baaskiiladaha Boostada iyo Khatarta Ku Xiran Iyaga
Dib-u-soo-kabashada botnets waxaa loo isticmaalaa in lagu soo dejiyo oo lagu beegsado adeegyo internet ah, sida DDOS (Diidmada Diidmada Adeegyada). Waxa kale oo ay bixiyaan tiro badan oo ah ololaha spam. Sababtoo ah dadka isticmaala fikrad maaha haddii bacbaarada boogaha ay kufsadaan kombiyuutarkooda, waa sahlan tahay in lafdhabarta si ay u xadidaan macluumaadkaaga shakhsiyeed kaas oo markaa loo isticmaalo xatooyada khatarta aqoonsiga.
Nik Chaykovskiy, oo ah Sare Maamulaha Guusha ee Macaamiisha, wuxuu sharxayaa in waxyaabaha ugu xun ay tahay cybercriminals ay abuuraan botnets oo ay u iibiyaan shirkadaha internetka. Waxay markaa u isticmaalaan botnets cybercrimes kedib adduunka oo dhan - comparacion entre fotografia digital y analogica. Boorsooyinka IoT waa uruurinta qalabka la jajabiyey, oo ay ku jiraan jidka, DVR, kaamirooyinka, qalabka la xiran karo iyo dhowr tignoolaji ah. Waxaa badanaa la qaadaa fayrusyada waxayna u ogolaadaan kuwa weerarka qaadaya inay kantaroolaan oo ay qabtaan howlaha kala duwan ee labadaba gudaha iyo internetka. Dhamaan qalabyada IoT waxay leeyihiin habab ammaan oo liita iyo dabeecadaha sida waraaqaha la saadaalin karo, waxay ku xiran yihiin xisaabtamayaasha iyo meelaha la wadaago ee meelaha fogfog. Qeybta kambiyuutarrada badankoodu waxay adeegsanayaan qalabka korontada ku shaqeeya oo ay isticmaalaan qalab kala duwan oo ay ka mid yihiin dekadaha furan ama adeegyada nugul
Sida loo ogaado haddii PC-gaagu yahay qayb ka mid ah IoT ama bakhaarro lagu kabo
Waa sahlan tahay in la ogaado haddii kombuyuutarku uu qayb ka yahay botnet iyo sidoo kale waxaad qiimeyn kartaa saameynta uu ku leeyahay waxqabadka qalabkaaga. Marka kumbuyuutarku noqdo qayb ka mid ah qaybta rnet, wuxuu u shaqeeyaa si tartiib tartiib ah mana u dhaqmo sida ku qoran tilmaamahaaga. Intaa waxaa dheer, website-yadu si sax ah uma soo degi karaan, nidaamyadaada hawl-galladuna aad ayey uga badan yihiin su'aalo.
Boostarka iyo waraaqaha IOV waxaa lagu faray in ay qabtaan hawlo gaar ah. Waxay badanaaba mas'uul ka yihiin inay xadaan macluumaadka shakhsiyeed sida faahfaahinta kaararka deynta oo laga yaabo inaanay muuqan dadka isticmaala sababta oo ah anshaxooda aamusnaanta. Hackers oo loo yaqaan botmasters badanaaba waxay isticmaalaan botnets. Amarrada iyo maamulayaasha xakamaynta waxaa loola jeedaa inay soo dejiyaan botnets.
Khatarta soo socota waxay la xiriirtaa botnets
1. Waxay iska dhigaan inay noqdaan kuwo sharci ah oo kugu lug leh hawlaha shakiga leh:
Khatarta la xidhiidha botnets waxay la mid tahay halista barnaamijyada xaasidnimada ah iyo waxqabadyada laga shakiyo internetka. Tusaale ahaan, botnets waxaa loogu talagalay inay xadaan macluumaadkaaga shakhsiyeed iyo helitaanka faahfaahinta kaarka deynta. Waxay sidoo kale helayaan fursadahaaga fikradahaaga, qorshayaasha, iyo lambarka sirta ah, mararka qaarna waxay kugu qasbaan inaad gujiso xiriirkooda bogagga shabakadda. Waa inaad fahamtaa marka kumbuyuutarku kugu dhaco, ma sii wadi doono shuruudahaaga laakiin wuxuu qaban doonaa shaqooyinka uu qoondeeyey hacker
2. Ma jiro khad u dhexeeya kombiyuutarka shakhsi ahaaneed iyo shirkadaha iyo aaladaha mobile:
Khadka u dhaxeeya kombiyuutarada shirkadaha iyo shakhsiyaadka waa bulwal. Dhamaanteena waxaan noqon karnaa dhibbanaha khayaanada botnet, iyo sida kaliya ee looga takhalusi karo waxay ku xiran tahay barnaamijyada ladagaallanka khayaanada. Tijaabinta iyo joojinta khatarta macmiilka botnet waa dhammaantiis waxaad u baahan tahay si loo hubiyo badbaadadaada internetka. Laga soo bilaabo dhinaca farsamada, botnets waa la joojin karaa barnaamijyada anti-naceyb ama barnaamijyada antivirus. Waxaan joojin karnaa infekshannada ku jira taraafikada shabakada waxayna si dhakhso ah uga takhalusi karaan